दश औंला जोडेर अब पाँचौं विबाह नगर्ने प्रतिज्ञा गर्दै छबि ओझा यस्तो भन्छन् (भिडियोसहित) – Halkhabar kura
६ बैशाख २०७८, सोमबार ०४:१३
दश औंला जोडेर अब पाँचौं विबाह नगर्ने प्रतिज्ञा गर्दै छबि ओझा यस्तो भन्छन् (भिडियोसहित)
शिल्पाको दोस्रो श्रीमान् छवि ? मुख्य विषयमा किन मौन ?
निर्माता छवि ओझा र उनकी चौथो श्रीमती अभिनेत्री शिल्पा पोखरेल बिचको मुद्धा यतिबेला चर्किरहेको छ । हुन त यो एउटा मुद्धा हो ।
तर, विषय फरक फरक भएकाले यो मुद्धासँग चार वटा विषय जोडिएका छन् । एउटा सम्बन्ध विच्छेद, अर्को मानाचामल, तेस्रो अंश मुद्धा र चौथो बहुविवाह मुद्धा ।
बहुविवाहको मुद्धा भने छवि ओझाकी जेठी श्रीमती हेमा ओझाले छवि ओझा र शिल्पा पोखरेल दुबैलाई विपक्षी बनाएर हालेको अदालतको कागजमा देखिन्छ ।
चलचित्र क्षेत्रमा ‘बा’ उपनामले चिनिने निर्माता छवि ओझा अर्थात ‘छवि बा’ विगत चार बर्षयता गुमनाम झैँ देखिएका छन् । फिल्म बनाउने फ्याक्ट्रीका रुपमा परिचित ‘छवि बा’ले चार वर्ष यता कुनै फिल्म बनाएको हामीलाई जानकारी छैन ।
बानेश्वर हाइटमा रहेको उनको अफिस नमस्ते नेपाल पनि त्यहाबाट सारिएको छ । उनको अफिस यतिखेर थापागाउँ स्थित कान्तिपुर फिल्म एकेडेमीको एउटा कोठामा सिमित भएको बुझ्नमा आएको छ । सरसर्ती हेर्दा छवि ओझाको ‘हरिबिजोग’ भएको छ । यतिबेला छवि न्यायको प्रखाईमा छन् ।
शिल्पाको दोस्रो डिभोर्स- शिल्पाले केहि अन्तरवार्ताहरुमा के भनिरहेकि छिन् भने-‘यो भन्दा अघि मेरो कसैसँग अफेअर चाहिँ थियो तर विवाह भएको थिएन । छवि जी नै मेरो पहिलो श्रीमान् हो ।’ तर जुन अदालतमा शिल्पाले छवि ओझालाई सम्बन्ध विच्छेद, अंश र मानाचामलाको मुद्धा हालेकी छन् त्यहि अदालतमा मिति २०६८ साल भदौ ८ गतेका दिन विकाश बस्याल भन्ने व्यक्तिसँग सम्बन्ध विच्छेद अर्थात डिभोर्स भएको मुद्धा नम्बर ३९-०६८-०१८८२ मा उल्लेख गरिएको छ ।
अदालतको अभिलेख साखामा रहेको मिसिल नं. ०६८/ ६०२ बाट समेत स्पष्ट हुन्छ । यसको मतलव शिल्पा छविसँग विवाह गर्नु अघिनै डिभोर्सि रहेछिन् ।
शिल्पाको नयाँ प्रेमी- यत्सै, शिल्पाको नयाँ प्रेम सम्बन्धको विषयले पनि बजार तातिएको छ । शिल्पाको प्रेम भोजपुरी फिल्मका निर्माता तथा निर्देशक सोनु खत्रीसँग भएको हल्ला केहि अघिदेखि नै गाईगुई चल्दै आएको थियो । सोनुकी श्रीमती कोमल खत्रीले हामीलाई पठाएको भिडियोमा सोनु र शिल्पा प्रेममा रहेको बताएकी छन् । अब शिल्पा र सोनुको के सम्बन्ध छ, उनले भने जस्तो हो होइन किटानका साथ् भन्ने स्थिति छैन ।
एपिवान टेलिभिजनमा प्रसारित कार्यक्रम रजतपतमा भएका बिषय यिनै हुन् । तर, शिल्पाले एउटै विषयमा मात्र बोलेकी छन् । सोनुसँगको प्रेम सम्बन्धको बारेमा उनको ठुलो आपत्ति छ । जबकि सोनुसँगको प्रेम सम्बन्धको बारेमा रजतपटमा केहि प्रष्ट पारिएको छैन । बाहिर आएका गसिप, हल्ला र सोनुकी श्रीमतीको भनाइ मात्र प्रस्तुत गरिएको छ ।
तर, कार्यक्रमा प्रस्तुत गरिएका मुख्य विषयमा भने मौन छिन् शिल्पा । पहिलो श्रीमानसँग भएको डिभोर्सको विषय, सम्पतिका लागि छविसँग विवाह गरेको हो कि होइन भन्ने विषय, मानाचामल र अंशको विषयमा शिल्पाले केहि बोलिनन् । यी विषयलाई शिल्पाले कहिँ कतै उल्लेख गरेकी छईनन । जबकि जनताले यिनै विषयमा स्पष्टिकरण चाहिरहेका छन् । यी विषयमा कहिले बोल्छिन् त शिल्पाले ?
यसैबीच शिल्पा प्रकाश सुवेदीलाई हदै सम्मको कारवाही होस् भनेर एपिवान टेलिभिजनमा निवेदन दायर गराएकी छन् । कार्यक्रममा प्रस्तुत भएका सामाग्री झुठा र भ्रामक रहेको उनको भनाई छ । कार्यक्रम प्रस्तोता सुवेदीलाई कानुनको कठघरामा उभ्याउनु पर्ने उनले निवेदनमा उल्लेख गरेकी छन्।
Previous श्रीनिका र श्रीतुलाई लिटिल प्रिन्स एण्ड प्रिन्सेस २०२१ को उपाधि
Next बरिष्ठ कलाकार मदनकृष्णसहित परिवारका पाँच जनामा कोरोना पोजेटिभ